Ezemidlalo | Scrolla Izindaba | Page 3
Ishobolo elomboxo lilahlekelwe izimpahla
Iqembu lebhola lombhoxo lasekolishi lase-Wales liphoqeleke ukuthi lizilolonge ligqoke amasokisi ngemuva kokulahleka kwemithwalo yalo kuleli.
Isizobuya eye-Awcon njengoba ibisamisiwe ngenxa ye-Covid
Sibheka ezemidlalo yangempelasonto, ne-Women’s Africa Cup of Nations (i-Awcon).
Babanjwe inkunzi abadlali beBafana
Izihlabani ezimbili zeBafana Bafana – umdlali wasesiswini uThabo Cele nomdlali wasemuva uSiphephelo "Yaya" Sithole – bagetshengwe ngesikhathi bebuyela ekhaya ngemuva kwamasizini abo eYurophu.
Eyekhilikithi nomqondisi omusha
Inhlanhano yekhikithi kuleli i-Cricket SA (CSA) ithule u-Enoch Nkwe njengomqondisi omusha wekhilikithi.
Izihibe emdlalweni ngenxa yemvula
AmaProteas athwale kanzima osukwini lwesithathu lwesivivinyo sabo bebhekene nabesifazane base-England ngoLwesithathu okokuqala ngenxa yokushaya okuhle kwabasingathi bomdlalo nangenxa yemvula ngesikhathi samaseshini amabili okugcina.
Bazogqoka omunye umbala ukweseka i-Ukraine
I-Wimbledon kulindeleke ukuthi ixegise umthetho wekhodi yokugqoka emhlophe ukuze abadlali bakhombise ukweseka i-Ukraine.
I-Zim ifuna ukubuyela kwelombhoxo lomhlaba
Iqembu lesizwe lombhoxo lase-Zimbabwe linethemba lokuthi lingaphumelela ukuhlungela iNdebe yoMhlaba okokuqala ngqa ngemuva kweminyaka engu-30.
Kushayisana izinkulumo ngesinqumo somdlali we-PSG
U-Idrissa Gueye we-PSG unconywe njengeqhawe ekhaya e-Senegal ngemuva kokubikwa ukuthi wenqabile ukufaka ifulegi lothingo ejezini lakhe ngokusho kukaBacary Cisse.
Uyathuthuka unompempe wesifazane wasemakhaya
Okhulele endaweni yasemakhaya e-Nqamakwe e-Eastern Cape, unompempe webhola u-Akhona Makalima akakaze azibone enza umsebenzi owawuzomvumela ukuthi ahambele izwekazi lonke.
Umpetha welomphebezo ucabanga eyomhlalaphansi
Ngemuva kokuphuma emzuliswaneni wokuqala we-Wimbledon Grand Slam uSerena Williams uthe kungase kube okokugcina edlala kulo mqhudelwano wodumo.